Intlanzi yeteleskopu: yonke into ekufuneka uyazi ngenkathalo yabo | Ngeentlanzi
Siye sathetha iintlanzi zeCARP ngamanye amaxesha kule bhlog. Namhlanje siza kuthetha ngeentlobo ezahlukeneyo zekhaphethi yegolide: imalunga ne Intlanzi yeteleskopu. Eyona nto iphambili kuyo yimilo yamehlo ayo. Luhlobo olwaziwayo ngeDemekin, Amehlo eDragoni, kunye neMoor. Kuxhomekeka ekubeni ifumaneka phi le ntlanzi, inikwa igama lesidlaliso kunye nelinye.
Yeyona ntlanzi ithandwayo kwihlabathi. Ngaba uyafuna ukwazi okungakumbi malunga neteleskopu yentlanzi?
1 Iimpawu zentlanzi yeTeleskopu
5 Iindidi zentlanzi yeteleskopu
5.1 Intlanzi yeteleskopu emnyama
5.2 Intlanzi yesibonakude sePanda
6 Iimpawu ze-Aquarium
8 Izifo kunye namaxabiso
Iimpawu zentlanzi yeTeleskopu
Ngaphakathi characid usapho Kukho iintlobo ngeentlobo zeentlanzi, ezingaqhelekanga nezinomdla, eziguqule amehlo abizwa ngokuba ziiteleskopu okanye iDemekin. Oludidi lwavela e-China ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX, kwaye olona phawu lwalo ngamehlo alo, abonakala ngathi ahluma entloko, oko kukuthi, ame ngohlobo lokuba aqikelelwe. Nangona kunjalo, nangona befumana igama leentlanzi zeteleskopu, umbono wabo umncinci kakhulu.
Ezi ntlanzi zifumaneka kwiindawo ezingenakubalwa zamanzi kunye neetanki zentlanzi kwihlabathi liphela. Le ntlanzi iye yasekhaya ngabantu abafuyelwa iinjongo zokuhombisa. Ngalo lonke ixesha, kule minyaka idlulileyo, inzala iye yakhetha ngakumbi, inika iindidi esinazo namhlanje.
Indawo apho ezinye iintlobo zoluhlobo zenziwa khona namhlanje eKoriyama, isixeko saseJapan.
Yintlanzi encinci, efikelela kakhulu I-30cm ubude kunye nobunzima besiqingatha seekhilogram, Inobomi obulindelweyo beminyaka emihlanu ukuya kwelishumi.
Umzimba ubume oburhangqiweyo kunye nemigca egudileyo. Ngokuqhelekileyo banamaphiko okutshatisa imigca yasemva kunye nepectoral. Inomphetho we-caudal oneengcebiso ezijikelezileyo ezibulela ubungakanani bawo.
Amehlo ale ntlanzi ayabonisa kwaye akhuselwe ngesiciko esivulekileyo. Ngamehlo alinganayo entlanzi, ziya kubiza kakhulu, kuba zinikwe ixabiso eliphezulu.
Iintlanzi azinabungqongqo kuba ayinako ukubhukuda. Ekuqaleni, xa bebancinci, bahlala beneengxaki ezibonakalayo, kodwa ezi ziba nzima kakhulu ngokuhamba kwexesha. Ezinye iingcali zibonisa ukuba intlanzi iphulukana nokubona kwayo emva kweminyaka emibini okanye emithathu yobomi iyonke.
Ngokombala, intlanzi yeteleskopu inombala oqinisekileyo ofikelela nakwiziphelo zamaphiko. Iintlanzi ezinamathoni angaphezulu zinomgangatho ongcono. Oku kufezekisiwe ngenxa yenyani yokuba ukuzaliswa kokuthinjwa kuphuhliswe kakhulu kwaye kuneentlobo ezahlukeneyo ze-monochromatic ezinemibala eyahlukeneyo. iorenji, tyheli, mhlophe, bomvu okanye mnyama.
Sinezinye iisampulu zeteleskopu ezinemibala emibini. Oku kwaziwa ngokuba ngumbala wepanda. Xa iintlanzi ziyi-bicolor kukho iindidi ezininzi zokudityaniswa kombala. Singawafumana amehlo amnyama kunye namaphiko kunye nomzimba omhlophe (owaziwa ngokuba ngumbala wepanda kunye nobuninzi ngakumbi) kunye nabanye abomvu-mhlophe, bomvu-bomnyama, mthubi-mnyama.
Ezinye zezi ntlobo kulula ukuzifumana kwaye ezinye azifumaneki.
Enye ye iintlanzi zeteleskopu ekhethekileyo Ngubomi bakhe obuphantsi, ngenxa yendlela ethile kubuchule bakhe obuncitshisiweyo bokuqubha kunye nakwimeko yakhe yokubonwa esiba nzima ngakumbi xa kudlula iminyaka yakhe. Iingcali ezininzi ebaleni ziyangqina ukuba emva kweminyaka emibini okanye emithathu, ezi ntlanzi ziqala ukuba neengxaki zokuphela kombono wazo, ezinokuphelisa ukungaboni kakuhle kwiimeko ezininzi.
Iyintlanzi ethanda ukuthandwa kwaye iyathanda ukungqongwa zezinye iintlanzi ezifanayo nayo. Bahlala ngokwamaqela kwaye banoxolo. Kuba azikho ndawo, abahlali behlasela ezinye iintlanzi zohlobo lwabo okanye ezinye.
Inendlela yokuziphatha enomdla esekwe kwi Ukuqhubeka kokuhamba kwamatye asezantsi, ukubetheka kwizityalo kunye nokutyhala umhombiso we-aquarium.
Into ekufuneka uyithathele ingqalelo xa usongeza iqabane ayikokubabeka ngefry, kuba bayaphela bayitya.
Le ntlanzi inomdla, ngoko ayiyi kunika iingxaki ezininzi ekudleni kwayo. Ukongeza, yintlanzi etya kakhulu kwaye ngenxa yoko, kubalulekile ukulawula iintlobo zokutya ezinikiweyo.
Inokondliwa ngokutya okuphilayo, njenge brine shrimp, imibungu, imifuno kunye nemifuno eluhlaza, kunye neepellets okanye iiflakes, njl. Oku kutya kwahluka-hlukeneyo kufuneka kunikwe amatyeli aliqela ngosuku kunye nokuncinci. Nangona isisitya esidlayo, inesisu esincinci kakhulu, kwaye ihlala ikhathazwa sisifo sokungondleki.
Ukuba ukutya akulunganga kunokuchaphazela ukuqubha.
Iintlanzi zeteleskopu azifikeleli ekukhuleni ngokwesondo de kube ngunyaka okanye emibini emva kokuzalwa. Kuxhomekeke kubukhulu obuzuzileyo, kulula okanye hayi ukuzala kubo ekuthinjweni. Ukuthandana ngaphambi komtshato kuqala xa inkunzi iqala ukulandela umntu obhinqileyo kwaye iqhubeka imtyhalela kwizityalo ezikwi-aquarium. Ngale ndlela imazi ikhupha amaqanda ayo.
Njengaye Ingelosi yentlanzi, ezi ntlanzi ziyi-oviparous. Amaqanda ayo ancangathi kwaye atyheli kwaye ancamathela kwizityalo zaselwandle. Amaqanda aqandusela phakathi kweeyure ezingama-45 ukuya kwezingama-72 ngokuxhomekeke kubushushu bamanzi.
Ukutya okuqhotsiweyo kwi-zooplankton. Kuxhomekeke kudidi, kuthatha iiveki ezimbalwa ukubumba iimpawu.
Ukonyusa izinga lokuzala kwakhona, abanye abavelisi basebenzisa indlela yokuzalisa ngesandla evumela ukuchumisa kweqanda. Lendlela ingadala umonakalo kwintlanzi ukuba ayenziwanga ngokuchanekileyo.
Xa ukuzala kugqityiwe, iintlanzi ezindala zingatya amaqanda asele encanyathiselwe kwizityalo. Ngesi sizathu, ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukwahlula iintlanzi kumaqanda abo. Umfazi uyakwazi ukubeka phakathi kwama-300 nama-2000 amaqanda ngexesha.
Iindidi zentlanzi yeteleskopu
Intlanzi yeteleskopu emnyama
Uninzi lwezi ntlanzi lunemizimba enzulu, ende kunye nobuhle. Amehlo abo ayabukeka kwaye anokufikelela kwi-15 cm ubude. SUkulindela ubomi kuphakathi kweminyaka emi-6 nengama-25.
Uninzi lwezi ntlanzi alugcini umbala omnyama kubo bonke ubomi bazo, kodwa endaweni yoko lutshintshe umbala wesisu. Ezi ntlanzi zaziwa kakhulu ngokuba lukhuni kwaye kulula ukuzinyamekela.
Intlanzi yesibonakude sePanda
Amehlo aqaqambile kwaye akhula ngokuthe ngcembe kunye nobudala. Ngobudala inokuphulukana nombala wayo kwaye ijike ibe ngumbala o-orenji nomhlophe okanye olunye udibaniso lwemibala.
Zizintlanzi zamanzi ezibandayo ngokungqongqo.
Ezi ntlanzi zifuna i-aquarium enkulu (ngaphezulu kwama-70 eelitha zamanzi) ubuncinci zibe neekopi ezintathu. Zinovakalelo kutshintsho ngequbuliso kubushushu bamanzi kwaye azinyamezeli amaqondo obushushu asezantsi kakuhle
Kuyacetyiswa ukuba ungasebenzisi ii-urns ezijikelezileyo, kuba ziyalonakalisa kakhulu utshintsho lwegesi. Ngendlela efanayo, ubushushu bamanzi kufuneka bube phakathi kwe-18 ukuya kuma-23 degrees Celsius, ngelixa i-pH yayo kufuneka ibengu-7 kunye no-7,5.
Xa i-aquarium iqala ukucoca, sukudala ukuphazamiseka kumanzi athintela ukuhamba kwawo, njengoko sikhumbula ukuba amandla abo okuqubha asezantsi.
Kuyacetyiswa ukuba i-aquarium ibe nezityalo zendalo kwaye kufuneka ibekwe kwindawo emnyama, kuba ezi ntlanzi zinomdla ekukhanyeni. Ukuba bahlala ekukhanyeni ixesha elide, ziyakwazi ukuphuhlisa ukungunda.
Ubushushu bamanzi kufuneka ube phakathi kwe-10 ukuya kwi-24 yeedjos. Badinga ioksijini efanelekileyo kwaye abadluli kula maqondo obushushu okanye baya kufa. Ukwenza ngcono i-oksijini ye-aquarium, iblue diffuser kufuneka ibekwe.
Akufanele uzibeke nezinye iintlanzi ezidada ngokukhawuleza kuba zinokukwenzakalisa kwaye zingqubane kwaye zibebe ukutya kwazo.
Amaqabane afanelekileyo icorydoras.
Ukuba i-aquarium igcinwe ikwimeko ezifanelekileyo kulula ukuthintela izifo, kodwa ezinye izifo zisenokubonakala.
Xa intlanzi ichaphazelekayo kungcono ukuyisa kwi-aquarium eyahlukileyo kwaye uyiphathe ngokukhawuleza.
Unokuba nezifo ezifana ukudumba (isifo sezintso), isifo sephepha sentlanzi (intlanzi ikhula isisu esingenamngxunya kunye neempawu ezinje ngokudinwa, ukukhubazeka okanye amaphiko alahlekileyo anokubakho), umsila owaphukileyo kunye nokujikeleza kokugqibela okubangelwa lusulelo lwebhakteriya, njl.
Ixabiso lale ntlanzi lijikelezile phakathi kwe- € 2,90 kunye ne- € 5 kuxhomekeke kuhlobo.
Ngolu lwazi ungagcina intlanzi yakho yeteleskopu kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeteleskopu
Ndathenga enye kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, kodwa xa ndaphosa ukutya kuyo, yayingatyi. Ndohlule kancinci ukuze atye ngoba nabanye bebekhe batya ngaphambili. Kodwa akukho nto. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo wasweleka kwaye andazi ukuba kwakutheni
Iipaca fernandes sitsho
Hee, ndifuna ukuba ne-1 ye-googly eyes pes, kodwa ndifuna enye ipes, ingaba zingaphi iilitha i-pessary ekufuneka ibekhona? I-GRASIAH
Phendula i-Paca fernandes
zama ukubeka iliso, ngobunono kwaye ubeke amathontsi ambalwa e-amoxyxilin